नयाँ वर्ष सन् २०२१ को शुभकामना ! - Online Majdoor
शुक्रबारबाट नयाँ वर्ष सन् २०२१ को आरम्भ हुँदैछ । अघिल्लो वर्ष झण्डै यही समयमा सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीबाट संसारले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन । बरु बेलायतमा देखिएको कोभिड–१९ को उत्परिवर्तन भएको कोरोना भाइरसको नयाँ सन्त्रास संसारभर फैलिएको छ । त्यसकारण नयाँ वर्ष सन् २०२१ कसरी अघि बढ्ने हो, भविष्यको गर्भमै छ । तथापि, आउँदै गरेको वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा क्रमशः सहज बन्दै जाने संसारले आशा गरेको छ किनभने सन् २०२० का कठिनाइपूर्ण दिनहरूमा महामारी प्रतिरोधमा मानिसले धेरै अनुभव हासिल गरिसकेको छ । सन् २०२० को उत्तराद्र्धमा संसारमा कोभिड–१९ को खोप सार्वजनिक प्रयोगमा आइसकेको छ । सन् २०२१ मा संसारका सबै देशका सबै जनतासम्म यो खोप सहज रूपमा पुग्ने आशा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले संसारमा फेरि एकपल्ट पुँजीवादी व्यवस्थाका कमजोरी सबैसामु उजागर गरिदियो । नाफामा आधारित पुँजीवादी व्यवस्था रहेका देशहरू राजनीतिक र सैनिकरूपमा जतिसुकै बलियो भए पनि महामारी सामनामा ज्यादै कमजोर सावित प्रमाणित भए । विश्व पुँजीवादको केन्द्र मानिएको संरा अमेरिका कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा असफलताको उदाहरण बन्यो । तर, चीन कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा आफू सफल मात्र भएन, संसारका अन्य देशलाई समेत महामारीविरुद्ध लड्न सहयोगको हात बढायो । महामारीसँगै पुँजीवादी देशहरू आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गए । महिनौंको लकडाउनको कारण करोडौँ–करोड जनताले रोजगारी गुमाए । उद्योग–कलकारखाना टाट पल्टे । पुँजीवादी सरकारहरूलाई सङ्कटको सामना गर्न हम्मेहम्मे भयो । अन्ततः पुँजीपति वर्गको उद्धार गर्न लकडाउन खुल्ला गरियो । मानिसहरू काममा फर्के । त्यही क्रममा धेरै गरिब जनता सङ्क्रमित भए । पुँजीवादको अमानवीय तस्वीर संसारले यो क्रममा छर्लङ्ग देख्यो ।
कोभिड–१९ महामारीसँगै संसारले यो वर्ष जलवायु परिवर्तनको कारणबारे पनि छलफल ग¥यो । पृथ्वीको स्वास्थ्यमा आइरहेको खराबीको मूल कारण फेरि पनि पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । जलवायु परिवर्तन रोकथामको निम्ति संसारका पुँजीपतिहरू र सरकारहरूले गम्भीर विचार नगर्ने हो भने आगामी दिनहरूमा अरू पनि महामारीले मानिस र संसारलाई दुःख दिनेछ ।
महामारीको क्रममा देखिएको यो कुरुप पुँजीवादको कारण संसारले वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी ग¥यो । निःसन्देह पुँजीवादको विकल्प भनेको समाजवादी व्यवस्था हो । समाजवादी सरकारहरूले जनतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएकोले महामारी नियन्त्रणमा चमत्कारिक सफलता हासिल ग¥यो । तर, पुँजीवादी शासकहरूको लागि महामारी आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय बन्यो । महामारी नियन्त्रणमा आफ्नो असफलता छोप्न उनीहरूले अनेक झुट र भ्रमको प्रचार गरे । तर, पुँजीवादको कुहीगन्ध भने जसै गरे पनि गन्हाउन छोडेन ।
कोभिड–१९ महामारीको कारण पुँजीवादी र साम्राज्यवादी मोर्चा आर्थिक, नैतिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर बनेको छ । पुँजीपतिहरू आज के जुक्ति लगाए आफ्नो ‘स्वर्ग’ जोगाउन सकिन्छ भनी चिन्तन गरिरहेका छन् । संसारमा यसअघिका पुँजीवादी सङ्कटको पनि पुँजीपति वर्गले अनेक धुत्र्याई गरेर सङ्कटको ‘सफल अवतरण’ गर्न सफल भएका थिए । तर, कोभिड–१९ महामारीले संसारका जनतालाई कस्तो राजनीतिक व्यवस्था ठीक भन्ने विषयमा उचित बाटो देखाइसकेको छ ।
भविष्यमा फेरि पनि कोभिडजस्ता महामारी न्यूनीकरण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनबारे समीक्षा गर्न ढिला गर्नु हुन्न । साथै, महामारीको कारण हुनसक्ने क्षति कम गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ । नयाँ वर्षमा संसारका न्यायप्रेमी जनताले पुँजीवादको विकल्पको खोजीमा सफलता पाउने आशासहित शुभकामना !
चीन विश्वमा पहिलो अर्थतन्त्र बन्नुको अर्थ !